Axmed Madoobe oo baaq u diray madaxda dowladda, sheegayna inuu diyaar u yahay… – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo baaq u diray madaxda dowladda, sheegayna inuu diyaar u yahay…
Madaxwaynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo habeenkii xalay soo xiray shirka nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa madasha ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa.
Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la fariisto islamarkaana xalliyo dhammaan cabashooyinka ay qabaan shacabka iyo xubnaha mucaaradka.
Sidoo kale, wuxuu Axmed Madoobe sheegay in Jubbaland ay heshiis ku aasaasantay mar walbana ay ku socon doonto raali ahaanshaha iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Axmed Madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay cid waliba oo wax tabanaysa inay ka soo qeyb gasho shirka dib u heshiisiinta Jubbaland ee habeenkii xalay ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Dhinaca kale, madaxweyne Axmed Madoobe ayaa madaxda dowladda federaalka ugu baaqay inay taageeraan shacabka ay hogaanka u yihiin islamarkaana qaatay heshiiska hanaanka dowladeed ee Jubbaland.
Ugu dambeyntii, Axmed Madoobe ayaa baaq uu u diray ummada Soomaaliyeed, isagoona ugu baaqay inay ku dadaalaan tallaabooyinka lagaga hor-tagayo xanuunka saf marka ah ee COVID-19, kaas oo muddooyinkii ugu dambeysay sida xowliga ah ugu faafaya gudaha dalka.